Iindaba - Isibonelelo sokusebenza kwesikudlwana esincinci kunye nexabiso
Iitoni ngokubanzi ze mini-excavatoringaphantsi kweetoni ezi-2, ububanzi bungaphantsi kweemitha ezili-1.3, umzimba mncinci kwaye ujikelezo luyatshintsha. Ukusebenza okuphezulu, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, ukusebenza okrelekrele sisikhokelo sayo sophuhliso.
Isimbiwa esincinci ikakhulu ukuziqhelanisa nokusebenza kunye nezibonelelo:
Isimbiwa esincinci ilungele indlela, imibhobho engcwatyelweyo, umsebenzi osisiseko, igadi, ukugcina amanzi amancinci, ubunjineli obuncinci bezobunjineli, ukutsalwa kwendlu, indlu eluhlaza, ukwakhiwa kwebhulorho, ulwakhiwo lwam kunye nenye indawo yokusebenza emxinwa, kunye nezinye iimfuno ezizodwa zomsebenzi wesiza.
Ubunzima ngokubanzi bulula, ukuhanjiswa kwezothutho kulunge kakhulu, ngaphandle kwetreyila ekhethekileyo, izithuthi eziqhelekileyo zinokutsalwa ngokuthe ngqo, iindleko zokusetyenziswa zincitshisiwe kakhulu, ngaxeshanye ngenxa yevolumu encinci kunye nokusetyenziswa kwesixhobo sokuphambuka, kulunge kakhulu ukwakhiwa kwendawo emxinwa.
Apha sithatha i-Lipai mini-excavator njengomzekelo wokungenisa izibonelelo zokusebenza eziphambili:
1. Inkqubo ye-hydraulic isebenzisa inkqubo yokulawula amandla okupompa ama-3 ukuqinisekisa ukudlala ngokupheleleyo nokusetyenziswa kwamandla enjini. Inkqubo yeHydraulic isasaza ngokufanelekileyo kwaye isebenzise ukuhamba, okutshintsha kunye nokuphucula ukusebenza kwesikhuphi esincinci.
2. Inesixhobo esinciphisa ukubamba injini, esinokunceda ukunciphisa ukusetyenziswa kwepetroli kunye neendleko zokusebenzisa xa i-injini ingasebenzi okwethutyana.
3. Ukusetyenziswa kwempompo yepiston eguquguqukayo kunye nokuhanjiswa kwamandla kunokutshintsha uxinzelelo kunye nokuhamba kwenkqubo ngokomthwalo wenkqubo ye-hydraulic. Inokugcina umsebenzi wokumba okuphezulu kunye nokuguqulwa kokusebenza okukhawulezileyo, kwaye isebenzise ngakumbi amandla ombane ukuze isebenze kwaye iphucule ukusebenza ngokukuko.
4. I-injini inezixhobo ze-flameout ezingxamisekileyo, ezinokuthi zitshise ngokuzenzekelayo xa uxinzelelo lweoyile luyehla ngokungaqhelekanga, ukuthintela umonakalo oyintlekele obangelwe kukusetyenziswa kakhulu kwe-oyile okanye ukungakhathalelwa komqhubi.
5, Ukusetyenziswa koxinzelelo lwe-hydraulic system ye-CLSS kunye ne-teknoloji yokuhambisa isiseko kunokusekwa kwinjongo yomqhubi yokufumana ukusebenza ngokuchanekileyo, ukusebenza ngokufanelekileyo.
I-6, ukujikeleza okungasetyenziswanga ngokulula kunokugqibezela ukujikeleza okungama-360 ° kwindawo emxinwa, ukulungelelanisa okuhle, ukusebenza ngokukhuselekileyo.
7. Ukusetyenziswa kwetekhnoloji ye-CPU encinci ye-microcomputer inokubeka iliso kwimeko yokusebenza kwesithuthi nangaliphi na ixesha, ukuvusa isiphoso, ukuqonda ukusebenzisana kwabantu ngomatshini, kunye nokuphucula kakhulu ukugcinwa kunye nokusebenza kakuhle.
8, isixhobo sembuyekezo eyakhelwe-ngaphakathi, xa isenzo sokumba xa izinto zolawulo zingaphazamisani, ziphucula ukusebenza komsebenzi, zinciphise ixesha lokusebenza.
9. Inkqubo yokujonga umthwalo inokunika ukuhamba okufunekayo kwe-actuator ngokwe-Angle yesiphatho. Xa le nkqubo ingasebenzi, ukufuduswa kwempompo ephambili kunokuncitshiswa kube sisixa esincinci, esinokuthi sinciphise ukusetyenziswa kwepetroli.
10, ngokuhambelana nolwakhiwo lobunjineli lomntu, ingxolo ephantsi, ukungcangcazela okuphantsi, kunokunciphisa kakhulu ukudinwa kokuqhuba, ukuphucula ukusebenza kakuhle komsebenzi.